Dalalka G7 oo ka shiraya arrinta Suuriya - BBC News Somali
Dalalka G7 oo ka shiraya arrinta Suuriya
Image caption Xoghayaha arrimaha dibedda ee Maraykanka, Rex Tillerson
Xoghayaha arrimaha dibedda ee Maraykanka, Rex Tillerson ayaa maanta magaalada Lucca ee dalka Talyaaniga kula kulamaya wasiiradda arrimaha dibedda ee dalalka xubnaha ka ah ururka G7.
Kullanka wasiiradda arrimaha dibedda ee G7 ayaa labada maalmood ee soo socda waxaa si weyn looga doodi doonaa sidii loogu qancin lahaa madaxweyne Putin, in uu soo afjaro taageerada milateri ee uu siiyo madaxweyne Assad-ka Suuriya iyo sidii loo dardar gelin lahaa wadahadalada nabadda ee dalkaasi.
Xoghayaha arrimaha dibedda ee Britain, Boris Johnson, ayaa la filayaa in uu xoogga saaro sidii cunaqabateyn cusub loogu soo rogi lahaa Ruushka, haddii uu dalabyadaasi ku gacan sayro.
Xoghayaha arrimaha dibedda ee Maraykanka, Rex Tillerson, oo shirka ka dib la filayo in uu u duulo Moscow, ayaa rajaynaya in uu helo taageerada dalalka G7 si uu dalabyo adag u hordhigo madaxda Ruushka.
Mr. Tillerson oo warbaahinta la hadlay maalmihii lasoo dhaafay, ayaa sheegay in muhiimadda ugu weyn ee ay Washington ka leedahay Suuriya ay hadda tahay sidii meesha looga saari lahaa ururka isku magacaabay dowladda Islaamiga.
Taasi marka laga guul gaaro ka dib, ayuu sheegay in Maraykanka uu diiradda saari doono hannanaka siyaasadeed ee la filayo in aakhirka xukunka looga qaado madaxweyne Assad.